विशेषज्ञको सुझाब : हरेक जन्मदिन मिर्गौला परीक्षण गरेर मनाऔँ – Health Post Nepal
२०७५ फागुन ३० गते १७:२०
रोग सानो होस् वा ठूलो, अधिकांशमा लाग्नेबित्तिकै शरीरमा रोगका प्रभाव र प्रस्ट चिनिने लक्षणसमेत देखापर्न थाल्छन् । रोगको सुरुवातमा देखिने प्रभाव र लक्षणका कारण समयमै उपचारमा जाँदा बिरामी निको हुने तथा पूर्वअवस्थामै फर्काउन सकिने हुन्छ । तर, मिर्गौलारोगमा त्यस्तो हुँदैन । मिर्गौलारोगमा रोगले धेरै असर पुर्याइसकेपछि मात्र लक्षण देखिन सुरु हुन्छ । मिर्गौलाले झन्डै ६० प्रतिशतभन्दा बढी काम गर्न छाडेपछि मात्र त्यसका लक्षण बिरामीले थाहा पाउने गरेको चिकित्सकहरू बताउँछन् ।
बिरामीले नियमित स्वास्थ्यपरीक्षण गराउँदा मात्र मिर्गौलामा रोग सुरु भएको थाहा हुने हुन्छ । तसर्थ, प्रायः रोगले नच्यापी स्वास्थ्यपरीक्षण नगराउने प्रचलन स्थापित भएको नेपाली समाजमा मिर्गौलामा ६०-७० प्रतिशत क्षति पुगिसकेर लक्षण देखिन थालेपछि मात्र चेकजाँचका अस्पताल पुग्ने गरिएका कारण मिर्गौलारोगीको संख्या दिनप्रतिदिन बढ्दै गएको हो । नियमित स्वास्थ्यपरीक्षण, आहार–विहारको सन्तुलनलगायतमा जनसाधारणलाई सचेत गराई मिर्गौला स्वस्थ राख्न सघाउ पुर्याउने उद्देश्यले नै प्रतिवर्ष १४ मार्चमा विश्व मिर्गौला दिवस मनाइँदै आएको छ । यसै अवसरमा बिहीबार काठमाडौं मेडिकल कलेजका मिर्गाैला विशेषज्ञ डा. अनिल पोखरेल नेपालको १० प्रतिशत जनसंख्यामा कुनै न कुनै किसिमको मिर्गौलासम्बन्धी रोग हुन सक्ने अनुमान रहेको बताउँछन् । मिर्गौलारोगीमध्ये १० प्रतिशतको अवस्था जटिल हुने गरेको उनको भनाइ छ । ‘अधिकांश व्यक्ति ६०–७० प्रतिशत मिर्गौला खराब भएपछि मात्र अस्पताल पुग्छन्,’ डा. पोखरलेले भने, ‘त्यसपछि पुनः सामान्य अवस्थामा मिर्गौलालाई फर्काउन सम्भव हुँदैन ।’
‘प्रारम्भिक चरणमा बिरामीले थाहा पाउँदैनन्, चिकित्सकले समेत पिसाब, रगत जाँच नगरी मिर्गौलारोग ठम्याउन सक्दैनन्,’ डा. पोखरेलले भने, ‘सुरुकै अवस्थामा मिर्गौला खराब हुन लागेको थाहा हुने हो भने त्यसलाई पूर्ण रूपमा स्वस्थ बनाउन सकिन्छ, त्यसैले हरेक वर्ष मिर्गौलाको परीक्षण आवश्यक छ ।’ उनी हरेक व्यक्तिले आफ्नो जन्मदिनको अवसरमा शरीरको पूर्ण चेकजाँच गर्न उचित हुने सुझाब पनि दिन्छन् । ‘सामान्य परीक्षणबाट पनि मिर्गौला समस्या भए–नभएको थाहा हुन्छ,’ डा. पोखरेल भन्छन्, ‘डेढ–दुई सयको खर्चमै ९५ प्रतिशत रोग लागे वा नलागेको यकिन गर्न सकिन्छ ।’
स्वस्थ देखिने व्यक्तिमा पनि मिर्गौलासम्बन्धी समस्या हुन सक्ने डा. पोखरेल बताउँछन् । ‘बिरामीमा लक्षण देखिँदा ढिलो भइसकेको हुन्छ, रोगका कारण बिस्तारै खराब भएको मिर्गौलालाई थप खराब हुन नदिन रोक्न सकिन्छ,’ डा. पोखरेल भन्छन्, ‘तर, पहिलेकै अवस्थामा फर्काउन भने सम्भव हुँदैन ।’
यस वर्ष विश्व मिर्गौला दिवसको नारा ‘किड्नी हेल्थ फर एभ्रिवन एभ्रिहोयर’ अर्थात् ‘स्वस्थ मिर्गौला सबैका लागि, सबै ठाउँमा’ दिइएको छ । ‘प्रारम्भिक चरणमा बिरामीले थाहा पाउँदैनन्, चिकित्सकले समेत पिसाब, रगत जाँच नगरी मिर्गौलारोग ठम्याउन सक्दैनन्,’ डा. पोखरेलले भने, ‘सुरुकै अवस्थामा मिर्गौला खराब हुन लागेको थाहा हुने हो भने त्यसलाई पूर्ण रूपमा स्वस्थ बनाउन सकिन्छ, त्यसैले हरेक वर्ष मिर्गौलाको परीक्षण आवश्यक छ ।’ उनी हरेक व्यक्तिले आफ्नो जन्मदिनको अवसरमा शरीरको पूर्ण चेकजाँच गर्न उचित हुने सुझाब पनि दिन्छन् । ‘सामान्य परीक्षणबाट पनि मिर्गौला समस्या भए–नभएको थाहा हुन्छ,’ डा. पोखरेल भन्छन्, ‘डेढ–दुई सयको खर्चमै ९५ प्रतिशत रोग लागे वा नलागेको यकिन गर्न सकिन्छ ।’
मुलुकमा करिब ३० लाख व्यक्ति मिर्गौलारोगको जोखिममा छन् । तीमध्ये ३० हजारको हाराहारीमा बिरामीको मिर्गौला नराम्ररी बिग्रने गरेको छ । बर्सेनि ३ हजार नयाँ बिरामी थपिने गरेका छन्, जो उपयुक्त डायलाइसिस वा प्रत्यारोपण सेवा पाए बाँच्छन्, अन्यथा तिनको मृत्युको विकल्प हुँदैन ।
मिर्गौला खराब हुने धेरै कारण रहेको चिकित्सक बताउँछन् । वंशानुगत, अस्वस्थकर खानपान, उच्च रक्तचाप, मधुमेह, जथाभावी औषधिको प्रयोगले मिर्गौला बिगारिरहेका हुन्छन् । ‘जथाभावी पेन किलर, एन्डिबायोटिकको सेवन गरेका व्यक्तिको मिर्गौला खराब भएको उपचारका क्रममा भेटिने गरेको छ,’ डा. पोखरेलले भने, ‘त्यसैले चिकित्सकको सल्लाहविना कुनै पनि औषधि सेवन गर्नुहुँदैन ।’
मिर्गौलाले काम गर्न छोड्दै जाँदा विभिन्न स्वास्थ्य समस्या देखिन थाल्छन् । ‘शरीर सुन्निने, वाकवाकी लाग्ने, भोक नलाग्ने, कमजोर महसुस हुने, रगतको कमी हुने, रक्तचाप अनियन्त्रित हुनेलगायत लक्षण देखिएमा मिर्गौलाले सही ढंगले काम नगरेको संकेत हुन्,’ डा. पोखरेलले भने ।
उच्च रक्तचाप, मधुमेह र अभिभावकमा मिर्गौलासम्बन्धी रोग भएका व्यक्तिमा मिर्गौलारोगको बढी जोखिम हुने डा. पोखरेल बताउँछन् । ‘जोखिममा रहेकाहरूले मिर्गौला बचाउनका लागि थप सजग हुनु आवश्यक छ,’ उनी भन्छन् । उच्च रक्तचाप र मधुमेहका रोगीले खानपानको सन्तुलनका साथै चिकित्सकीय सल्लाहबमोजिम औषधि सेवन गरेमा मिर्गौला बिग्रनबाट बचाउन सकिने उनी बताउँछन् ।
मिर्गौला हाम्रो शरीरको महत्वपूर्ण अंग हो । हामीलाई चलायमान बनाइराख्न मिर्गौलाले विभिन्न काम गरिरहेको हुन्छ । मिर्गौैला सिमीका दाना आकारका हुन्छन् । मुठीजत्रो यो अंग हाम्रो करङको हाडको ठिक तल हुन्छ । मिर्गौला लाखौँ रगत सफा गर्ने एकाइ (नेफ्रोन्स)को सहयोगले बनेको हुन्छ । प्रत्येक नेफ्रोनले सानो परिणाममा रगतलाई सफा गर्छ ।
डा. पोखरेलका अनुसार मिर्गौलाले रगत शुद्ध पार्नेदेखि रक्तचाप नियन्त्रण तथा शरीरमा काम नलाग्ने पदार्थ पिसाबमार्फत बाहिर पठाउने काम गर्छ । मिर्गौलाले शरीरमा अतिरिक्त काम नलाग्ने पदार्थ र तरल पदार्थको निर्माण हुन दिँदैन । मिर्गौलाले सोडियम, पोटासियम, फोस्फेटजस्ता इलेक्टोलाइटको स्तर स्थिर राख्छ । मर्गौलाले रक्तचापलाई नियन्त्रण गर्न हर्मोन पनि उत्पादन गर्छ, रातो रक्तकोषको निर्माणका साथै हाडलाई बलियो बनाउनसमेत सघाउँछ । रगतमा क्रिएटिनिन र युरियाको मात्रा बढी देखिनुले नै मिर्गौला फेल हुनुलाई दर्साउँछ ।
मिर्गौला खराब भएको पत्ता लागेपछि उपचार भनेको थप बिग्रन नदिनका लागि मात्रै भएको जानकारहरू बताउँछन् । रोग जटिल भएपछि डायलाइसिस र ट्रान्स्प्लान्ट नै गर्नुपर्ने हुन्छ । मिर्गौलारोगीहरूको संख्या बढेपछि नेपालगन्जका स्वास्थ्यसंस्थाहरूले काठमाडौंबाट समेत विशेषज्ञ चिकित्सक बोलाई चेकजाँच र उपचारको व्यवस्था मिलाउने गरेका छन् ।
मिर्गाैला सुपरस्पेसलिष्ट डा. पोखरेल सचेतना फैलाउन सके मिर्गौला पूर्ण रूपमा खराब हुनबाट जोगाउन सकिने धारणा राख्छन् । ‘ढिलो गरी लक्षण देखिने मिर्गौलारोगको उपचारमा बिरामीले ठूलो रकम खर्च गुर्नका साथै धेरै औषधि सेवन गर्ने झन्झट जीवनभर भोग्नुपर्ने हुन सक्छ,’ डा. पोखरेल भन्छन् । मिर्गौला मात्र नभएर अन्य जटिल स्वास्थ्य समस्याको समयमै पहिचान गर्न कम्तीमा वर्षमा एकपटक स्वास्थ्यपरीक्षण गर्न उनको सुझाब छ ।